Umvelisi womatshini waseBrush | UMatshiniXin Brush kuMatshini
Uyasithemba, Meixin ubungcali boMatshini Brashi.
I-3 yeAxis Hockey Brush yokwenza Umatshini
Ifayile ye-FMX ivumela utshintsho olukhawulezileyo malunga nemveliso entsha yebrashi.
4 Umatshini wokucoca i-Axis yangasese
[Iintloko] ezimbini eziguqukayo, intshukumo ezizimeleyo ezi-4, isetyenziselwa ibrashi yangasese encinci, abanye.
2 Umatshini wokuchwela i-Axis Broom
Iingubo iibhulashi ezineentloko zokufathutha, intshukumo ezizimeleyo ezi-2, isetyenziselwa oomatshini bokubrashe BABEKHAYA.
I-5 I-Axis kunye ne-1 iTufting Brush Machine
Eyona nto ibalaseleyo 5 i-axis 3 iintloko ezi-2 zokuntywila kunye nomatshini wokubrashi oyi-1tufting.
Inkonzo yokwenza ngokwezifiso iimfuno ezizodwa okanye umngeni kwishishini.
Siya kwenza ngokweesampulu zabathengi bethu ukuyila lo matshini .Siza kwenza ubungakanani obahlukileyo bemitshato. Ubukhulu bomgangatho womtshayelo: 400 * 60mm. Ukuba ufuna ukwenza ubungakanani obukhulu okanye eminye imibimbi ekhethekileyo, singathanda ukuyenza.
Ngokukodwa, kwi-roller brashi
& Umatshini webrashi yediski, olu hlobo lwebrashi lidla ngokusetyenziswa kwimizi mveliso yovavanyo lobungakanani boomahluko. sesinye sezizathu eziyifunayo.
1. Imibuzo: Abathengi baxela iimfuno ezifunekayo kunye nokuthobela.
2. Uyilo: Iqela loyilo liyabandakanyeka ukusuka ekuqaleni kweprojekthi yokuqinisekisa ezona mveliso zilungiselelwe zona zilungele iimfuno zabathengi.
3. Ulawulo loMgangatho: Ukuze sikwazi ukubonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu, sigcina sisebenza ngempumelelo& Inkqubo esebenzayo yoLawulo loMgangatho.
4. Ukuveliswa kwemveliso enkulu: Nje ukuba iiprototypes ziqinisekisiwe kuyilo ngokwefomathi, umsebenzi, kunye nemfuno, ukuveliswa kwinqanaba elilandelayo.
5. Singacwangcisa isithuthi sokwenza ii-odolo -kuba ngeenkonzo zethu zaphakathi, abanye abathengisi okanye indibaniselwano yesibini.
Siphumelele izatifikethi ezininzi zemveliso yethu malunga nomgangatho
NGUJIANGMEN MeixIN COMB WENZA IBANGO LOKWENZA IMALI, ukusukela ngo-2003, inkampani yethu ngokuyintloko yenza umzi-mveliso we-2-5axis wasekhaya kunye nebrashi yemizi-mveliso kunye noomatshini bomtshayelo, oomatshini bokucheba kunye neeflegi, umatshini wokusika i-pneumatic. Isetyenziselwa ukuvelisa iintlobo ezininzi zeebhulashi zasekhaya. Njengoku, iibhulashi zangasese, umtshayelo, ibrashi yokulinganisa, ibrashi yeenwele, ibrashi yebhotile nayiphi na imilo ebhulashi. Kwiibhulashi zeshishini ezinje nge: Roller brashi, ibrrashi yendlela, kunye nezinye izinto zebrashi.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, into yethu yokuqala ephambili ibisoloko iyinkonzo yabathengi kunye nolwaneliseko lwabathengi. Senze okuninzi ukuphakamisa amanqanaba omgangatho kwaye sizama ukuseka ulawulo lomgangatho wesandi kunye nenkqubo yokuqinisekisa. Ngaphaya koko, inkampani yethu ifumene imveliso yokuqinisekiswa kwelungelo elilodwa lomenzi kunye nesiqinisekiso se-CE.